NHM Writer For Unicode | Lionslayer : The Legend
6 Responses to “NHM Writer For Unicode”
O Bhikkhu says:
Unicode ကို Android tablet တွေပေါ်မှာသုံးလို့ အဆင်​ပြေနိုင်မလား သိချင်ပါတယ်။
နောက်ပြီးတစ်ခုသိချင်ပါသေးတယ်။ wordpress ဘလော့မှာ ယူနီကုဒ်ဖတ်လို့ရအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ သိချင်ပါတယ်။
လောလောဆယ် Google ကိုယ်၌က Complex shaping ဘာသာစကားတွေဖြစ်တဲ့ အာရပ်၊ ဟီဘရူး၊ ဟင်ဒီ နဲ့ အရှေ့တောင် အာရှ ဘာသာစကားတွေကို မထောက်ပံ့ပေးသေးတဲ့အတွက် မပြေနိုင်သေးပါ။ သို့ပေမဲ့ မရရအောင် ကြိုးစားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် On the way လို့တော့ ပြောနိုင်ပါပြီ။
မိမိဘာသာ Hosted လုပ်ထားတဲ့ WordPress ဘလော့တွေအတွက် MMUnicode Embed ကို သွင်းပါ။
When there is no sanction by Wests and Myanmar becomesagood place for investing.
But we are emphasizing on the fact that Myanmar Language is not only for country Myanmar but also for all Myanmar people around the world. So If we are lucky, we will be able to see Myanmar Unicode inayear on Mac.
When can we see this unicode include in Windows and iMac ?
ယူနီကုတ္ေဖာင့္ သြင္းျခင္း – Installing Myanmar Unicode Font « Lionslayer: The Legend says:
[…] စရိုက်သုံးဖို့ရန် လက်ကွက်အတွက် ဒီကိုသွားပါ။ Like Unlike AKPC_IDS += "242,";Popularity: 3% [?] Tagged as: Myanmar, […]